Fanohanana ara-teknika - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Laser Golden Professional fanohanana ara-teknika
Mba hahazoana antoka tena nitandrina sy lavorary ny fanompoana, dia tsy tonga lafatra ihany no mialoha ny fivarotana, varotra, sy Ankehitriny-fanompoana ny varotra rafitra, izahay koa fitondran-tena feno amin'ny fitantanana ny faritra manaraka ireto:
Voalohany, fitantanana rakitra mpanjifa Sound
1. Ny mpanjifa tsirairay dia manana ny rakitra ao amin'ny rafitra fanodinana fampahalalana momba ny serivisy aorian'ny varotra amin'ny laser volamena, noho izany dia afaka miantoka ny fanavaozana ny rindrambaiko amin'ny fomba ara-potoana;
2. Ny asa fanompoana tsirairay (fikojakojana, fiverenana mitsidika, fanadihadiana momba ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa sns) dia voarakitra an-tsoratra amin'ny antsipiriany ary azo anontaniana sy anadihadiana amin'ny fotoana rehetra. Isao tsindraindray ny fikojakojana ny fitaovan'ny mpanjifa ary manaova soso-kevitra mety ho an'ny mpampiasa.
Faharoa, Henjana ny fitantanana ekipa teknika
1. Ny mpiasan'ny serivisy tsirairay avy amin'ny laser laser dia manana mari-pahaizana eny amin'ny oniversite na ambony, ary ny mpiasan'ny serivisy aorian'ny fivarotana dia nandalo fiofanana maharitra nandritra ny fotoana fohy ary nandalo ny rafi-pandrefesana ny teknolojia talohan'ny voamarina hiasa.
2. Ny tombontsoan’ny mpanjifa no voalohany indrindra, ary andraikitra tsy azo hozongozonina ny mikarakara sy manaja ny mpanjifa tsirairay. Izahay dia manome antoka fa manomboka amin'ny fanekena ny fitarainana mankany amin'ny serivisy eo an-toerana, ny fangatahana rehetra avy amin'ny mpanjifa dia ho voaloa tanteraka amin'ny laser volamena.
3. Ny ivon-toeram-panompoana laser volamena dia hanao ombieny ombieny ny mpiasan'ny serivisy aorian'ny varotra ho an'ny fiofanana ara-teknika, manavao ny fahalalana ara-teknika ary manatsara ny fahaiza-manao.
4. Mba hiantohana ny fanatsarana tsy tapaka ny tolotra ho an'ny mpanjifa, dia nanangana rafitra fifaninanana sy fitahirizana talenta ihany koa izahay mba hahaveloman'ny olona matanjaka sy manan-talenta, mba hahazoana antoka fa mahazo tolotra mahafa-po mitohy ny mpampiasa.
Fahatelo, fitantanana ny fitondran-tena momba ny serivisy
1. Ny orinasa dia nametraka fitsipi-pitondran-tena sy fitondran-tena mitambatra mba hahazoana antoka fa manara-penitra ny fizotran'ny serivisy ary voalamina ny fomba fiasa sy serivisy. Ny kalitaon'ny serivisy ateraky ny tsy fitovian'ny tena manokana dia mihena sy voasoroka.
2. Ny orinasa dia nanangana rafitra fanaraha-maso serivisy maro karazana. Sazy henjana no hihatra amin’ireo izay mandika ny etika matihanina sy ny fenitry ny asa fanompoana.
Fahaefatra, fitantanana fantsom-baovao Smooth
1. Ny mpanjifa dia afaka mifandray amintsika amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa toy ny telefaona, fax, taratasy, e-mail, sy hafatra momba ny tranonkala.
2. Ny foibem-panompoana mpanjifa tamin'ny laser volamena dia mandinika tsara ireo fantsona etsy ambony amin'ny fotoana tena izy. Ny fifampidinihana amin'ny mpanjifa, ny fitarainana ary ny fepetra hafa dia haverina ao anatin'ny fotoana fohy indrindra, ary hiezaka hampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Mba manompo tsara kokoa ny mpampiasa rehetra, ary aoka ireo mpampiasa vola amin'ny fitaovana tamin'ny laser vokatra soa aman-tebiteby-maimaim-poana, dia hanome volamena tamin'ny laser mpampiasa amin'ny varotra tsara rehefa avy-fanompoana.
Nanangana rafitra fanodinana fampahalalana momba ny serivisy aorian'ny varotra eran-tany izahay ary manana 400-969-9920 serivisy serivisy aorian'ny varotra mba hanaiky ny fanontanian'ny mpanjifa, ny fitarainana ary ny fitakiana fanamboarana, ary manara-maso ny mpanjifa 24 ora isan'andro. Afaka mankafy ireto serivisy manaraka ireto ny mpanjifantsika:
1. Hatramin'ny datin'ny fividianana, ankafizo ny fanavaozana rindrambaiko maimaim-poana mandritra ny fiainana.
2. Aorian'ny fahatongavan'ny milina, ny mpiasa ara-teknika dia ho eo amin'ny toerana ihany koa mba hanome fametrahana voalohany, fanofanana ary fanofanana ara-teknika ho an'ny mpampiasa, mba hahazoana antoka fa afaka miasa tsara ny fitaovana ny mpanjifa. Rehefa avy nanao sonia sy nanamafy ny mpanjifa dia azo tanterahina ny fiofanana;
3. Rehefa vita ny fametrahana sy fanofanana milina vaovao mandritra ny 2-3 andro, dia hiantso ny mpanjifa ny Gold Laser Customer Service Center. Ny antso miverina dia ahitana ireto lafin-javatra manaraka ireto:
a) Efa voapetraka sy apetraka ve ny fitaovana, ary afa-po amin'ny fitaovana ve ianao?
b) Na mahafehy ny fomba fiasan’ny mpanjifa ny mpanjifa ary afaka miasa tsy miankina, inona no fanampiana ilaina?
c) Afa-po ve ianao amin'ny fihetsiky ny injeniera amin'ny fanofanana?
d) Mampahafantatra ny mpanjifa ve ny injeniera aorian'ny varotra aorian'ny fiantsoan'ny ivontoerana serivisy mpanjifa 400-969-9920?
4. Araka ny toe-javatra miverina, Raha misy olana, ny ivon-toeram-pandraharahana ho an'ny mpanjifa dia hampandre ny injeniera ara-teknika na injeniera fanofanana mba handray fepetra hamahana. Raha mbola tsy voavaha izany, dia hanome valiny momba ny "taratasy mifandray amin'ny asa" any amin'ny sampan-draharaham-pikarohana sy fampandrosoana mifandraika amin'ny teknolojia izahay mba hanampy amin'ny famahana. Aorian'ny fahavitan'ny asa dia hiverina amin'ny mpanjifa ny foiben'ny serivisy mpanjifa.
5. Mba hampitomboana ny tombontsoan'ny mpanjifa sy hampiroborobo ny fanatsarana tsy tapaka ny Golden tamin'ny laser fanompoana, ny mpanjifa tsirairay dia hahazo mihoatra ny in-telo antso indray, izay:
a) Telo andro taty aoriana rehefa vita ny fanofanana fametrahana milina vaovao;
b) Telo volana taty aoriana taorian'ny fanofanana fametrahana milina vaovao;
c) Fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fanamboarana na serivisy aorian'ny varotra;
d) Santionany ny fiverenana mitsidika ho an'ny karazana milina mitovy ary mitady fanatsarana;
6. Golden tamin'ny laser fanompoana foibe telefaonina 400-969-9920 maimaim-poana antso fanompoana dia hanaiky mpanjifa fanontaniana, fitarainana sy ny fanamboarana fepetra, ary ny mpanjifa foibe nandefa taorian'ny varotra injeniera ho amin'ny fanamboarana ny toerana. Mampanantena izahay fa ny mpanjifa ao anatin'ny 300 km amin'ny toeram-pivarotana tamin'ny laser volamena, ny injeniera aorian'ny varotra dia ho eo an-toerana serivisy sy fikojakojana ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fandraisana fitarainana; mpanjifa 300 kilometatra miala ny toeram-pivarotana serivisy aorian'ny varotra, ny injeniera aorian'ny varotra dia hanaiky fitarainana ao anatin'ny 72 ora Eny an-toerana serivisy sy fikojakojana; ho an'ny mpanjifa vahiny dia hamaly ao anatin'ny 10 ora, manao asa fanamboarana ao anatin'ny 72 ora.
Mila aorian'ny serivisy aorian'ny izao!
Azafady mba omeo ny Series Series No. rehefa mandefa mailaka anay ianao aorian'ny serivisy aorian'ny!